Qarax ka dhacay Degmada Baladweyne
7 Aug 7, 2012 - 8:57:32 AM
Laba Askari oo ka tirsan ciidamada DF ee ku sugan Baladweyne ayaa ku dhintay 5 qof oo rayid ahna way ku dhaawacmeen Qarax bam oo xalay ka dhacay gudaha degmadaas, kaasoo ka dhashay bam uu watay askari ka tirsan ciidamada dowlada.
Maamulka Gobolka Hiiraan ee DF ayaa sheegay in dhacdadu ay ahayd mid nasiib-daro ah, waxayna sheegeen in askarigii bamka watay iyo askari ay goobta ku dhinteen, halka dadka dhaawacmayna ay dhamaantood ahaayeen shacab.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in falkan uu aad cabsi u geliyay, iyadoo dhaawacyadii ka dhashay qaraxa la dhigay Isbitaalka Guud ee Baladweyne halkaasoo lagu daweynayo.
"Qaruxu wuxuu ahaa mid aad u xoogan, markii goobta aan tagnay waxaa naloo sheegay inuu ka dhashay bam uu watay askari ka tirsan ciidamada maamulka oo ku sugnaa goob dad rayid ah ay ku caweynayeen" ayuu yiri goobjooge la hadlay GO oo ku sugan Baladweyne.
Dhanka kale, Qarax miino oo lala eegtay ciidamada Ethiopia ee Baladweyne ku sugan ayaa ka dhacay maanta degmadaas, iyadoo aan la ogeyn khasaaraha kasoo gaartay ciidamada Ethiopia, inkastoo aan la sheegin khasaare kasoo gaaray dadka shacabka ah.
Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo Ciidamada Ethiopia ay shalay ku dileen Degmada Baladweyne ganacsade si weyn halkaas looga yaqaanay, inkastoo la sheegay inay u dileen is-faham-daro soo dhexgashay.
Ma ahan markii ugu horeysa oo ay ciidamada Ethiopia ku dilaan Baladweyne ganacsade si weyn looga yaqaan degmadaas, iyadoo la xusuusto in bishii hore lagu dilay degmada Baladweyne Ganacsade caan ahaa.
Degmada Baladweyne ayaa waxaa ka dhacayay Qaraxyo khasaare geysta oo ay mas'uuliyadooda sheegato Al-shabaab oo laga fara-maroojiyay gacan ku haynta degmadaas [Dec, 2011].